Nepali Christian Bible Study Resources - क्रूसको दिन
» अध्ययन मालाहरू » महान् घटनाहरू » ८-क्रूसको दिन
अघिल्ला पाठहरूमा हामीले अध्ययन गरेका विषयहरूलाई स्मरण गर्दै तलको जोडा मिलाउने अभ्यास पूरा गरौं:
(घ) जलप्रलय अघिको समय (ङ) दनियल २ र ७ -- सांसारका चार महान् साम्राज्यहरू
(च) राजा शाउलको शासन
(छ) मिश्र देशको दासत्व
____ मानिसले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरे र पापमा फसे (पाठ १)।
____ मानिस पापमा लागिरहे र दुष्टताको गहिराइमा झन् झन् गिरे (पाठ २)।
____ मानिसले आफ्नो दुष्ट योजनाहरू पूरा गर्न नपाओस् भनी परमेश्वरले उनीहरूलाई रोक्नुभयो (पाठ ३)।
____ मानिस अति कठोर दासत्वमा पर्‍यो (पाठ ४)।
____ अविश्वासको कारण मानिसले परमेश्वरको सिद्ध प्रबन्धलाई प्राप्‍त गर्न सकेन (पाठ ५)।
____ मानिसले परमेश्वरको शासनलाई इन्कार गर्‍यो र उहाँको सट्टा आफै राजा बन्न रोज्यो (पाठ ६)।
____ राजाहरू र राज्यहरूद्वारा मानिस पराजित, पक्राउ र नियन्त्रण गरियो (पाठ ७)।
समय बित्दै गयो र मानिस दासत्व र पापको सागरमा झन् झन् डुब्दै थियो। मानिसको लागि केवल एउटै आशा थियो -- परमेश्वर। कुनै पनि उपाय नलाग्दा, पापको समाधान गर्न, “परमेश्वरले आफ्ना ________लाई ______________” (गलाती ४:४)। समस्या आदमबाट शुरु भयो; त्यसको समाधान ख्रीष्टले गर्नुभयो: “यसकारण जसरी एउटा मानिसले आज्ञा भङ्ग गरेकोले (ती मानिस ले थिए? ______________) धेरैजना पापी बनिए, त्यसरी नै एकजनाले आज्ञापालन गरेकोले (ती मानिस ले थिए? ________________) धेरैजना धर्मी बनाइनेछन्” (रोमी ५:१९)।
मुक्तिदाता संसारमा आउनुभएको महान् घटना संसारले विर्सन सकेको छैन। सारा संसारले मान्ने “इश्वी सम्वत्” ख्रीष्टको पहिलो आगमनमा आधारित छ। त्यसअनुसार अहिले हामी २० ______ ए.डी. (A.D.) सालमा छौं। यसको अर्थ यो हो कि ख्रीष्ट संसारमा आउनुभएको २० ______ वर्ष (लगभग) भएको छ।
बि.सी. (B.C.), “बिफोर क्राइष्ट” ले संक्षिप्त रुप हो जसको अर्थ अंग्रेजिमा “ख्रीष्ट अघि” अर्थात् ख्रीष्ट जन्मनु अघि भन्ने बुझन्छ। ए.डी. “आनो डोमिनी” (Anno Domini) ले संक्षिप्त रुप हो जसको अर्थ ल्याटिन भाषामा “प्रभुको वर्षमा” भन्ने बुझन्छ। अहिले प्रभुको वर्षमा २० ______ पुगेको छ (भनाइको अर्थ उहाँ आउनुभएको करिब २० ______ वर्ष भइसकेको छ)।
येशू ख्रीष्टलाई कसैसँग दाज्न सकिन्न! उहाँ अद्वित्तीय हुनुहुन्छ! तलको बयानलाई विचार गरौं:
करिब दुई हजार वर्ष अगाडि एकजना मानिस आए जसको जन्म प्रकृतिको नियमअनुसार थिएन (उहाँ कन्याद्वारा जन्मनुभयो)। यस मानिस गरिब भई जिए, अपरिचित रूपमा हुर्के (नासरत नाउँको एउटा साधारण गाउँमा)। उनले टाढा-टाढा सम्म यात्रा गरेनन्। उनले एकै पटक आफ्नो देशको सिमाना काटे; त्यो पनि शिशु अवस्थामा उनको ज्यान जोगाउन विदेशिनु पर्दा (जब उनी मिश्रदेश लगिएका थिए)।
उनको न सम्पत्ति थियो न सम्मानजनक पदवी। उनका नातेदारहरू चर्चित थिएनन्। उनले न ता तालिम पाएका थिए न ता औपचारिक शिक्षा नै।
शिशु अवस्थामा उनको कारण देशका राजा हतोत्साहति भए; वाल्यावस्थामा उनले बाइबल पवित्र शास्त्रका विद्वानहरूलाई चकित तुल्याए; वयस्कमा उनले प्रकृतिको नियमलाई नियन्त्रण गरी देखाए, समुद्रका छालमाथि जमीनमा झैं हिँडे, समुद्रलाई शान्त गराए।
उनले हजारौंलाई औषधिबिना निको पारे अनि आफ्नो सेवाको बापत एक पैसा लिएनन्।
उनले एउटै पुस्तक लेखेनन्, तर पनि उनको विषयमा लेखिएका पुस्तकहरू राष्ट्रभरिका सम्पूर्ण पुस्तकालयहरूमा अट्न सक्दैनन्।
उनले एउटै गीत लेखेनन्, तरैपनि सारा गीतकारका संख्याभन्दा धेरै गीतका निम्ति विषयवस्तु उनी नै भएका छन्।
उनले एउटै कलेजको स्थापना गरेनन्, तर स्कूल र विश्वविद्यालयहरू सबै मिलेर पनि उनकै जति चेलाहरू आफ्नो भएको दाबी गर्न सक्दैनन्।
उनले कुनै सेनालाई नेतृत्व गरेनन्, न ता एउटै सिपाहीलाई भर्ती गरे, न ता एउटै गोली चलाए। तर इतिहासमै उनको भन्दा बढी स्वयंसेवकहरू आफ्नो भएको दाबी गर्न सक्ने कुनै पनि नरेश वा नेता छैनन् जसको आज्ञा सुनेर कैयौं शत्रुहरुले आफ्ना हातहतियारै त्यागेर आफ्ना जीवनहरू समेत समर्पण गरेका छन्।
उनले कहिल्यै मानसिक चिकित्सा (psychiatry) को अभ्यास गरेनन्, तर संसारका सम्पूर्ण डाक्टरहरूले भन्दा धेरैका टुटेका हृदयहरूलाई उनैले निको पारेकाछन्।
विश्वका कैयौं ठाउँमा हरेक हप्ताको एक दिन व्यापार धन्दा बन्द हुन्छ र उनलाई सामूहकि रूपमा जुटेर आराधना गर्नेरहरू मण्डली भवनहरूमा ओइरो लाग्दछन्।
बिगतका ग्रीस र रोमका अहंकारी शासकहरू आए अनि गए। बिगतका वैज्ञानिकहरू, विद्वानहरू र धर्मगुरुहरूका नामहरू आए अनि गए; तर यस मानिसका नाम भने प्रत्येक दिन फैलँदै छ। आजको पुस्ता र उनको क्रूसको टंगाइको बीच झण्डै २००० वर्षको अन्तर भएता पनि उनी जिउँदा छन्। हेरोदले उनलाई नष्ट गर्न सकेनन्, र चिहानले पक्रेर राख्‍न सकेन उनलाई।
--अमेरिकन ट्रयाक्ट सोसाइटीद्वारा प्रकाशित One Solitary Life (“अद्वित्तीय ख्रीष्ट”) नामक पर्चाबाट साभार
येशू ख्रीष्ट, परमेश्वरका एकमात्र पुत्र, संसारमा किन आउनुभयो? यस प्रश्‍नको उत्तरको निम्ति बाइबलका यी ५ ओटा पदहरू पढ्नुहोस्: मत्ती १:२१; लूका १९:१०; यूहन्ना ३:१७; १ तिमोथी १:१५ र १ यूहन्ना ४:१४। उहाँ मु ______ गर्नलाई आउनुभयो; संसारले मु ______ पाओस् भनेर उहाँ आउनुभयो; उहाँ संसारको मु ____________ हुन आउनुभयो!
मानिसहरूलाई पापबाट बचाउन उहाँ मर्नै पर्‍यो, किनकि “__________को ज्याला __________ हो” (रोमी ६:२३)। पापको दण्ड मृत्यु हो। मानिस मृत्यदण्डको योग्य छ किनकि उ दोषी छ। ख्रीष्ट, जो निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो सट्टामा, हामीले पाउनु पर्ने मृत्यु दण्ड आफैले भोग्नुभयो। मानिसले उहाँमाथि विश्वास गरेर जीवन पाओस् भनेर उहाँ मर्नुभयो!
ख्रीष्टको क्रूस (मृत्यु) एक अति महत्त्वपूर्ण घटना थियो, यहाँसम्म कि क्रूसले सम्पूर्ण मानव जातिलाई दुई समूहमा विभाजन गर्दछ (यूहन्ना १२:३२-३३)। हरेक पुरूष स्त्री, बालबालिकाले यो प्रश्‍नको जवाफ दिनै पर्छ: क्रूसमा टाँगिनुभएको ख्रीष्टसँग म के गरूँ? तपाईं क्रूसको कता पट्टी पर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईंको जवाफमा नै निर्भर छ।
तपाईं क्रूसको कतापट्टी हुनुहुन्छ? जता पट्टी हुनुहुन्छ, त्यतातिरको खाली ठाउँमा आफ्नो नाम लेख्‍नुहोस्। बचाइएकाहरूका पट्टी तपाईं हुनुहुन्न भने, तपाईंले ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने समय आज नै हो (२ कोरिन्थी ६:२)!
« अन्यजातिहरूको समय
मण्डलीको जन्मदिन »